Daahir Geelle " Khatar ayaa kusoo wajahan Dimuqraadiyadda Curdunka ah ee Soomaaliya" - Awdinle Online
Daahir Geelle ” Khatar ayaa kusoo wajahan Dimuqraadiyadda Curdunka ah ee Soomaaliya”
Musharax Daahir Maxamuud Geelle oo kamid ah Musharaxiinta u taagan qabashada xilka Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka hadlay shirweynaha Maanta Musharaxiinta uga furmay Magaalada Muqdisho.
Waxaa uu sheegay Musharaxiinta inay isu yimaadeen, isna cafiyeen ayna meesha ka saareen madmadowgii dhex-dooda ahaa, isla markaana meel uga soo wada jeestaan marxalada kala guurka ah ee dalka.
Sidoo kale Musharax Daahir Maxamuud Geelle ayaa waxaa uu tilmaamay in baaqooda uu yahay nabad iyo dowladnimo sal adag iyo doorashada dalka oo ku dhacda si nabad oo xor ah, lagana fogaado wax kasta oo keeni kara qalalaase.
Musharaxiinta u taagan qabashada xilka Madaxweynaha Soomaaliya ayaa Maanta waxaa Magaalada Muqdisho uga furmay shirweyne socon doona muddo saddex maalmood oo looga hadlayo Arrimaha Doorashada dalka ka dhacaya ee 2020/2021, iyagoona Musharaxiinta sameeyn doona Is-baheysi mid ah.
Previous articleShirka Musharixiinta ee Maalinta koowaad oo War laga soo saaray
Next articleQalbi-dhagax oo shaaciyay cidda leh mas’uuliyadda dhiibistiisii